ညီလင်းသစ်: ချစ်သော အရိမဒ္ဒနပူရ
Posted by ညီလင်းသစ် au 9.11.09
အစ်မစိတ်ထဲတော့ သစ်နေတဲ့ ပုဂံက အရသာ မရှိပါဘူး ညီလင်းရယ်..
ဲမြန်မာစာ ဒုတိယနှစ်ပြီးတော့ ဆရာ ဆရာမတွေနဲ့ ကားသုံးစီး စုပြီး ပုဂံကို သွားခဲ့တဲ့ခရီး ကတော့ ဘ၀မှာ တကယ့်ကို အမှတ်တရ ပါဘဲ... ဘယ်လိုမှ ပြန်မရ နိုင်တော့ဘူး... ပြန်သတိရလွမ်းဆွတ်မိစေတဲ့ ညီလင်းရဲ့  ဓါတ်ပုံ တွေအတွက် ကျေးဇူးပါ... ဟို အရင်တုန်းကတော့ စဉ့်အိုးတွေ အဲလို စီထားတာမျိုး
ပုဂံက ဘယ်နှခါသွားသွား မရိုးသွားလောက်ဖူးတင်တယ်.. ညီညီတို့လည်း ပန်းချီလေ့လာရေး ၄၅ ရက်တိတိ နေဖူးတယ်.. ပုဂံနံရံပန်းချီတွေ ပြန်ကူးဆွဲကြတာ.. ဒါလည်း မပျင်းဘူးဗျာ..
ပုဂံ၎ ပုံလေးကို သဘောကျလိုက်တာ။ ပုဂံပြန်လည်ဖြစ်တဲ့ ကိုညီလင်းသစ်ကိုလဲ အားကျလိုက်တာ။
ဟုတ်တယ်အမမေငြိမ်း..ကျနော်လည်း သဘောတူ တယ်၊ ကျနော့်သူငယ်ချင်း ပုဂံသားတွေ ပြော,ပြောနေ တာရှိတယ်၊ “ ၇၅ ခုနှစ်ပုဂံငလျင်ရဲ့ တဝက်လောက်ပဲ ပြင်းအားရှိတဲ့ ငလျင်တစ်ခုပဲ လှုပ်လိုက်စမ်းပါကွာ၊ အားလုံးဟာ အရင်အတိုင်းပြန် လှသွားလိမ့်မယ် ”တဲ့၊
မ MieMie ရေ..ပုဂံကတော့ အဲဒီလို အမှတ်ရစရာတွေ ချည်းပါပဲလေ၊ အဲဒီစဉ့်အိုးတွေက Sunset Garden စားသောက်ဆိုင်က အလှစီထားတဲ့ အိုးတွေပါ၊
ဟုတ်တယ်နန်းညီရေ့..ဘယ်နှစ်ခါသွားသွား မရိုးနိုင်ပါ ဘူးဗျာ၊
မမိုး..ကျနော်လည်း စိတ်ကူးရသလို ရေးဖို့တော့ စဉ်းစားထားတာပါပဲခင်ဗျ၊
I like the 1st and the last pics. Feeling blur in my heart after seeing those pics. Lovely bagan. Too bad I don't have MM font here.
ံHello Ko Phyo...thanks for your appreciation. Yeah, we all feel, inaway or another, something undepictable after seeing its pics.
ကျနော်ပြန်တုန်းက ပုဂံကိုမ၀င်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။ အိမ်နဲ့လည်း နီးနေသားနဲ့ကို တမြန်နှစ်က နှစ်ဆန်းတစ်ရက် ရောက်ဖြစ်တာနဲ့ ခရီးစဉ်က ပယ်ထားခဲ့တာ။
ပုဂံဟာ ရာဇ၀င်ထဲမှာလည်း လှပသောနေရာ .. ။ လူတွေနှလုံးသား ၊ လက်တွေ့အမြင်မှာလည်း လှပသောနေရာ .. ။ ဓာတ်ပုံတွေထဲမှာလည်း လူကိုဖမ်းစားနိုင်သော နေရာ .. ။ ဒါပေမယ့် အခုအချိန်ထိ မရောက်ဖူးသေးဘူးကွယ် :(
တစ်ပုံချင်းကြည့်လာတယ်.. ပုဂံ(၅)လဲရောက်ရော Gtalk Status ပြောင်းလိုက်ပြီ။ "ပုဂံသွားချင်လိုက်တာ.........."
It'sashame that I have not been there yet. :(